Q and A (Over-18-year readers) May 2011 Q 1: ကျားအင်္ဂါ စိုစွတ်အောင် ဘယ်လို လုပ်ရပါသလဲ။ Q 2: ဘယ်ဟာ ပ်ိတ်တာလဲတော့ မသိဘူး။ Q 3: တကယ်လို့ မွေးလမ်းကြောင်း ပိတ်တယ်ဆို ကလေးမရနိုင်တော့ဘူးပေါ့။ Q 4: Vigrxplus ဆိုတဲ့ ကြီးထွား သန်မာဆေးကို သုံးကြည့်ချင်လို့ Q 5: ကျား+ကျားချင်း လိင်တူ တစ်ယောက်ထဲကိုပဲ ဆက်ဆံတာပဲဖြစ်ဖြစ်
Q 6: လိင်ဆက်ဆံရင် ခဏလေးဘဲ ၂ မိနစ်လောက်ဘဲ မကြာဘူး။ Q 7: Prexil, VigRX Plus, PreJac, Priligy ဆေးတွေက ဘယ်လိုသောက်ရမှာလဲ။ Q 8: KY ဂျယ်လီ ကို စမ်းသပ်သုံးကြည့်ချင်ပါတယ်။ Q 9: တကိုယ်ရေ အာသာဖြေခြင်းနဲ့ ဝခြင်း ပိန်ခြင်းဟာ သက်ဆိုင်ပါသလား။ 2011/5/17
• မရှင်းတာလေး ပြောပါအုံး။ မေးတဲ့သူက နာမည်အရ ယောက်ျားဖြစ်မှာဆိုတော့ သူကဆိုတာ မိန်းကလေးပေါ့။ • ဒါပေမဲ့ သူ့ပစ္စည်းက ပိတ်နေတယ် ဆိုတာ ဘာလဲ။ • မဆက်ဆံဘဲ ကလေးမရပါ။ တခုတော့ရှိတယ်။ ကလေးမရတာကို ရအောင် ဓါတ်ခွဲခန်းမှာ ပေါင်းစပ်ပြီး သားအိမ်ထဲ ပြန်ထည့်နည်းလုပ်ရင် ဆက်တံတာမပါဘဲ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်တယ်။ • မိန်းကလေး အပေါက်ပိတ်တယ်ဆိုရင် ဘယ်နေရာလဲ၊ သားအိမ်အဝလား၊ သားအိမ်ပြွန်လား။ • မွေးလမ်းကြောင်း ပိတ်တာဆိုရင် လိင်အင်္ဂါထိုးသွင်းလို့ကို မရနိုင်ပါ။
• ယောက်ျားလေး ပိတ်တယ်ဆိုရင် ပန်းငုံတာလား။ • ယောက်ျားအင်္ဂါ စိုစွပ်မှုဆိုတာ ထူးလုပ်ဘို့ မလိုပါ။ အသက်သိပ်မကြီးသေးသူမှန်သမျှ မလိုပါ။ အမျိုးသမီးကြီးများမှာသာ သွေးဆုံးချိန်ရောက်မှ၊ ဟော်မုန်းနည်းတာ ဖြစ်မှသာ မ-အင်္ဂါစိုစွပ်မှု နည်းတတ်၊ နှေးတတ်တယ်။ • ဘယ်အရွယ်မှာမဆို Foreplay ဆက်ဆံမှုအဆင့် (၁) ကို အချိန်ပေးရင် ဆေးသုံးစရာ မလိုပါ။ • Oral နည်းသုံးရင်တော့ ပိုအဆင်ပြေတယ်။ • လိုအပ်သူတွေသာ KY jelly သုံးဘို့ လိုပါတယ်။ 2011/5/18
• သားအိမ်ပြွန်အထိတော့ မဟုတ်သေးပါ။ အင်္ဂါပိတ်တယ်ဆိုတာ သားအိမ်ပြွန်ပိတ်တာကိုမှ ပိတ်တယ် ခေါ်လို့သာ ထည့်ရေးလိုက်တာ ဖြစ်တယ်။ • လိင်အင်္ဂါထိုးသွင်းလို့ မရဘူးဆိုတာ တကယ် မွေးရာပါ ပိတ်နေတာလဲ ရှားရှားပါးပါး ရှိသေးတယ်။ • အပျိုစစ်စစ်ကို ဆက်ဆံရင် နာကျင်မှု၊ စိုးရိမ်မှုကြောင့်လဲ ထိုးသွင်းမရ ဖြစ်နိုင်တယ်။
• လိင်အင်္ဂါထိုးသွင်းလို့ မရဘူးဆိုတာ တကယ် မွေးရာပါ ပိတ်နေတာလဲ ရှားရှားပါးပါး ရှိသေးတယ်။ • အပျိုစစ်စစ်ကို ဆက်ဆံရင် နာကျင်မှု၊ စိုးရိမ်မှုကြောင့်လဲ ထိုးသွင်းမရ ဖြစ်နိုင်တယ်။
• လက်ညှိုးကို ရေဆေးပြီး တချောင်းထဲ အသာအယာ ထိုးသွင်းကြည့်ပါ။ သူကိုယ်တိုင်လဲ လုပ်နိုင်တယ်။ တခါသုံး လက်အိတ် သုံးနိုင်ရင် ကောင်းတယ်။ လက်ဆစ် ဘယ်လောက်အထိ ဝင်နိုင်သလဲ။ 2011/5/20
• မွေးလမ်းကြောင်းပိတ်တယ်လို့ ခပ်လွယ်လွယ်ပြောတာက မတိကျသေးပါ။ • Imperforate hymen အပျိုမြှေးပိတ်တာ၊ အပေါက်သိပ်ကျဉ်းတာကို ပြောတာ။ • ရာသီလာနိုင်တဲ့ မိန်းကလေးမှာ အဲဒါမဟုတ်နိုင်ဘူး။ • ကလေးမရနိုင်သူ၊ ရဘို့ခက်သူဆိုတာ သားအိမ်ပြွန် ကျဉ်း-ပိတ် သူတွေမှာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
VigRX Plus ဆိုတဲ့ ယောက်ျား-လိင်အဂ်ါ တိုးတက်-သန်မာစေတဲ့ဆေးဟာ ဆေးကြော်ညာအဆိုအရ သဘာဝ ဒါမှမဟုတ် ဆေးဘက်ဝင် ပစ္စည်းတွေကနေ ဖေါ်စပ်ထားတယ်။ ဒီလိုဆေးမျိုးတွေမှာ ယေဘုယျ ပြောရရင် ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး နည်းလှတယ်။ ဒီဆေးမှာ ရှိနိုင်တာတွေက ခေါင်းကိုက်တာ၊ ဝမ်းချုပိ-ဝမ်းလျှောတာ၊ ပျို့-အန်ချင်တာ၊ အားယုတ်တာ၊ အိပ်မပျော်တာ၊ ကိုယ်မွှေးများတာ၊ အာခေါင်ခြောက်တာ၊ နှာခေါင်းသွေးယိုတာ၊ ရင်သားနာတာ၊ အစားပျက်တာ၊ အစာမကျေတာ၊ လိင်စိတ်နည်းတာ၊ ချွေးထွက်တာတွေ ဖြစ်တယ်။ ဆိုးဝါးတာ မပါဘူး။ ဆေးကြော်ညာမှာဘဲ ကောင်းတယ် ဆိုတာတွေ ပါတယ်။ ဒီဆေး ကောင်းပါတယ်လို့ ထောက်ခံသူတွေထဲမှာ ဆရာဝန်တွေလဲ ပါနေတယ်။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့တော့ ဒိထက် ပိုမပြောနိုင်ပါ။ 2011/5/27 Q 5: (၁) ကျား+ကျားချင်း လိင်တူ တစ်ယောက်ထဲကိုပဲ ဆက်ဆံတာပဲဖြစ်ဖြစ် မ+မချင်း လိင်တူ တယောက်ထဲကိုပဲ ဆက်ဆံတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရိုးမြေကြ နေထိုင်သွားရင် ဘာဖြစ်နိုင်ပါလဲ။
(၃) (Kamagra, Tadalis, Viagra) ပုံက ဆေးများသည် ကိုယ်ဝန်မရနိုင်တဲ့ ဆေးများဆိုတာ ဟုတ်ပါရဲ့ လား။ ၁။ လိင်တူဆက်ဆံတာကို လူမှုရေးဒေါင့်ကို မရေးလိုပါ။ ကျန်းမာရေးက ကြည့်ရင် ဘယ်သူ့မှာမှ ကူးစရာရောဂါ မရှိရင်တော့ လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါ ရစရာမရှိပါ။ ၂။ ကိုယ်ဝန်တားနည်းတွေအကြောင်း၊ အဆိုး-အကောင်းတွေအကြောင်း ရေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ နည်း မတူရင် အကျိုးလဲ မတူပါ။ ကလေးမရ-ရ အကြောင်းမှာ တားဆေးအပြင် တခြား စဉ်းစားစရာတွေလဲ ရှိပါသေးတယ်။ ရေးထားပြီးလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှာဖတ်ပါ။ ရှာမတွေ့ရင် သိချင်တဲ့ အကြောင်း တခုချင်း မေးနိုင်ပါတယ်။ ပို့ပေးပါမယ်။
Q 6: ကျွန်တော်က ပိန်တယ် ဝလည်းဝချင်တယ်။ ပြီးတော့ လိင်ဆက်ဆံရင် ခဏလေးဘဲ ၂ မိနစ်လောက်ဘဲ မကြာဘူး။ ဆက်ဆံတိုင်း ဆေးအမြဲသောက်ရတယ်။ ဆေးသောက်ပြီးရင် အမြဲတန်း အန်တယ် ခေါင်းမူးတယ် နေလို့ ထိုင်လို့ မကောင်းဘူး။ ထမင်းလည်း စားလို့ မရဘူး၊ အန်ချင်သလို ဖြစ်နေတယ်။ လေတတ်မှ အဆင်ပြေတယ်။ ကျွန်တော့် အသက်က ၂၅ ရှိပြီ။ ဆေးကတော့ ဆိုင်က ဝယ်သောက်တာ။ သေချာတော့မသိဘူးဗျ။ အိမ်ထောင်သက်က ၄ နစ်ရှိပြီး၊ ကလေးတော့ မယူဖြစ်သေဘူး။ အလုပ်တွေ လုပ်နေရလို့ ဓါတ်မှန်တို့ ဘာတို့တော့ မရိုက်ဘူး။ သွေးတိုးတော့ ရှိတယ်။ သောက်ဆေး ဖြစ်ဖြစ် ဘာလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ရမလဲတော့မသိဘူး။ လေကျင့်ခန်း လုပ်ဖို့တော့ အချိန် သိပ်မပေးနိင်ဘူး။ ၁။ Weight gain လှယုံမက ဝချင်သေးရင် ကို ဖတ်ပါ။ လိုက်နာပါ။
Q 7: ဆရာ ဆိုက်ထဲမှာ ပြောထားတဲ့ Prexil, VigRX Plus, PreJac, Priligy ဆေးတွေက ဘယ်လိုသောက်ရမှာလဲ။ တရက် တလုံးလား၊ ဆက်ဆံခါနီးလား။ ဆေးတွေကို တမျိုးကိုပဲ သောက်ရမှာလား၊ အကုန် သောက်ရမှာလား။ ဆေးတွေက ကျားအင်္ဂါ တောင့်တင်းတဲ့ ဆေးတွေနဲ့ကော ရောသောက်လို့ရလား။ • Prexil capsule ဆေးကို တနေ့ ၁ လုံး၊ အစာစားပြီး သောက်ပါ။ ၄-၆ လ ကြာရင် အကောင်းဆုံး အခြေအနေကို ရောက်လာမယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ၂ ရက် ၁ လုံး၊ နောက် ၃ ရက် ၁ လုံးသာ သောက်ပါ။ တရက် ၁ လုံး ဆက်သောက်လဲ ရတယ်။
Q 8: KY ဂျယ်လီ ကို စမ်းသပ်သုံးကြည့်ချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ၂ ယောက်က ခု (့) မြို့မှာပါ။ (့) မှ ဆေးဆိုင်တွင် သွားဝယ်ကြည့် သော်လည်း မရှိပါ။ မကြာခင် Mandalay ဆင်းဖြစ်မှပဲ ရှာဝယ်လိုက်ပါမယ်။ ဆေးဆိုင်တွင် KY ဂျယ်လီ ဟုဆိုရုံဖြင့် ဝယ်လိုရနိုင်ပါလား။ KY ဂျယ်လီ သည် သုံးလျှင် စိုးရိမ်စရာများရှိပါသလား။ မည်ကဲ့သို့ သုံးစွဲရမည်ကို ဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ်။ ကျွန်တော် ပန်းသေးပန်းညိုး ရောဂါ ခံစားနေရသည်ဟု ထင်ပါသည်။ ထိုကြောင့် Viagra ဆေးအစစ် ဝယ်လိုပါတယ်။ မည့်သည့် Brand သို့မဟုတ် မည်ကဲ့သို့သော Viagra ဆေးမျိုးကို ဝယ်ယူသင့်ပါလဲ။ တရုတ် ထုတ်ဆေးမျိုး ဖြစ်မှာစိုးလို့ပါခင်ဗျာ။ ဆရာ့ Website ကို ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုလို့မလွယ်ကူ လို့ပါ။ blogspot.com မှန်သမျှကို banned ထားလို့ပါ။ ၁။ KY Jelly က အများဆုံးသုံး နာမည် ဖြစ်တယ်။ အဲဒီဘက်မှာ တခြားနာမည် ဖြစ်မလားဘဲ။ ဖြစ်နိုင်တာတွေ ရှာပြီး ပို့လိုက်ပါတယ်။ KY Jelly ကို ချောဆီသဘော သုံးရတာဖြစ်လို့ လိုတဲ့အချိန်မှာ မ အင်္ဂါမှာဖြစ်ဖြစ်၊ ကျားအင်္ဂါဖြစ်ဖြစ် သုတ်လိမ်းပါ။ စောင့်နေစရာမလိုပါ။ ရေကနေဖေါ်စပ်တာဖြစ်လို့ သန့်ရှင်းဘို့လွယ်တယ်။ မသန့်သေးလဲ နေလို့ရတယ်။ မတည့်တဲ့သူ မကြားဘူးသေးပါ။ ၂။ Viagra သုံးဘို့ မလိုလောက်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်မှာပါ။ တကယ်စမ်းချင်ရင် ရေးထားတဲ့စာကို တွဲပို့လိုက်ပါတယ်။
Posted by Dr. Tint Swe at 10:33 PM Posted by
Cute Model Nan Khin in Beautiful Strapless Gree...
မြန်မာမလေးပဲ @ အချစ်တက္ကသိုလ်
Cute Nu Quynh Play Ball Photos
Sexy Car Girl Photos
စလုံးကတရုတ်မ တဲ့ မေးလ်ထဲရောက်လာပါ၏။
mail ထဲရောက်လာတဲ့ ပုံတွေ mail ထဲရောက်လာလို...
စအို (annal) ဆိုတာထိုးသွင်းစရာမဟုတ်ပါ အသက...
Nude အရင်အတိုင်းပါပဲ။ ဘော်ဒါကြီး ဆီကရတာပါ။
မြန်မာဟုမ်းမိတ်စစ်စစ် @ ရွာသာ...
webcam ပြမယ်...။ @ ရွာသား
Hsu Shune Lae Vs Pearl Win: Who'd You Rather ??! ...
Model Pearl Win in White Short Dress & Long Leo...
Myanmar Hot Model, Su Shune Lae in Sexy Fashion...
Photos: Gateway Band's First Album Promotion Even
Culture Fashion Show and Music Concert on 25 June ...
X X X MYANMAR
Myanmar beautiful Model, May Grace's Lovely Outdoo...
Myanmar New Face Model, Nan Khin's Fashion ...
Who'd You Rather??!!
Celebritys' Phone Number မိုးယုစံ -0951...
ဘူလေးတွေလဲ မသိ @ရွာသား
့hot girl !
Myanmar Cute Model, Lamin Ein in Beautiful Gown
myanmar sexy dancer (6)ဇာတ်သိမ်း
Photos: Monsoon Music Concert @ National Theatr...
Aphrodisiac လိင်စိတ်အားပေး အစာနဲ့ ဆေ...
Q and A (Over-18-year readers) May 2...
အမေရိကန်ရောက် ကချင်မတဲ့ mail ထဲရောက...
စလုံးက ဓါတ်ပုံဆရာတွေ မေးလ်ထဲရောက်လာတာ၊...
HOT GIRL @chitlumitelay
myanmar sexy dancer (5)
Pyay Ti Oo + Eaindra Kyaw Zin's Honeymoon in Ba...
ကက ခခ ဖဖ ဇဇ ဓာတ်ပုံ
Myanmar Cute Teenage Model Girl, San Yati Moe M...
Myanmar Popular Model, Moe Hay Ko in Beautiful We...
Myanmar Popular Model Girl, Wutt Hmone's Glorio...
hot kid !
myanmar sexy dancer (4)
myanmar sexy dancer (3)
အပျိုတွေလို နဂိုရည်မပျက် နေချင်ပါသတဲ့ တစ်...
ဗုဒ္ဓသာသနာကိုအဖျက်ပြုလုပ်သူ..ဒကာတော် ဗုဒ္ဓ သာသနာက...
myanmar sexy dancer (2)
myanmar sexy dancer (1)
ထွန်းထွန်း + မိုးပြည့်ပြည့်မောင်
Sexy မော်ဒယ်အသစ်ကလေးတွေ ပါ..
Model Ei Phyo Cherry on the Beach with Beautifu...
Myanmar Hot Girl, Nadi Wint Naing's Sexy Poses !...
တိုင်းရင်းသူလေး @myanmarywar ကျမမှာချစ်သူရှိတယ်
Model San Yati Moe Myint's Beautiful Outdoor Fa...
ဘယ်သူလဲတော့မသိဘူးဗျာ..။ @ အခ...
မြန်မာ vzo ချက် အခုနောက်ပိုင်းမြန်မာမတွေလဲ vzo ...
sex မဂ္ဂဇင်း (၂)
sex မဂ္ဂဇင်း (၁)
Myanmar Popular Model, Phway Phway's Fashion Ph...
တစ်ပုံတည်း @ ညမင်းသား
Vzo ချက်လေး ...
အင်္ဂလန်ကစုစန္ဒာဆိုပဲ @ ဒုတ်ကြီးမောင...
မျက်နှာသစ် အဆိုတော်မလေး နာမည်တော့မသိဘူးဗျ...
သူ့ ကို သိလား mail ထဲရောက်လာ၏။
Black Ant ယောက်ျား အားတိုးဆေး
Too wet ဒီအချိန်မှာ စိုလွန်းတာ
Ye Lay and Moe Hay Ko's Hot Couple Fashion Phot...
San Yati VS Wutt Hmone: Who'd You Rather??!!
Beautiful Myanmar Singer Yadanar Mai's Cute Photos...
Nandar Hlaing | Myanmar sexy actress | Myanmar hot...
home made photo !
Ampio premature ejaculation drug shows promise ယော...
Sperm သုတ်ပိုးတွေ အပြင်မှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာ ရှင်နိုင...
Myanmar Beautiful Model and Actress: Moe Yu San
2011 myanmar calender photo
၀၁။ ကျွန်တော်ချစ်တဲ့မမ (Ziddu) (Mediafire) (...
Ei Phyo Cherry in Colourful Hot Fashion Dresses...
Myanmar Singer, Wyne Su Khine Thein On the Beac...
အကြောလေးတွေစိမ်းလို့@ညမင်းသားဖ...
Myanmar Popular Actress, Su Pan Htra's Long Hair ...
Myanmar Popular Singer and Actress, Thazin's Ho...
Myanmar Actress, Eaindra Kyaw Zin's Photos on U...
Myanmar Popular Actress, Khine Thinn Kyi's Beau...
Myanmar Actresses' Beautiful Academy Fashion on ...
Beauty of Myanmar Actresses Before Academy Cere...
Myanmar Dancer and Actress: Darli Linn in Hot R...
Myanmar Dancer and Actress: Darli Linn in Sexy ...
Myanmar Popular Actor, Thinzar Wint Kyaw @ Shoo...
Myanmar Sexy Amateur Model Girl, Su Yamin ...
Myanmar Singer, Khun Sint Nay Chi Myanmar Sin...
Myanmar New Face Model: Aye Myat Thi Han's Lovely...
Beautiful Photos Collection of Myanmar Models and...
Myanmar Hot Models' Sexy Pose for 2011 Calendar...
Myanmar Models: Phway Phway and Aye Myat Thus' Ta...
Myanmar Sexy Model Girl, Nwe Nwe Tun's Beautifu...
Myanmar Popular Model and actress, Molody's Hot S...
Myanmar Hip Hop Singer, Sandy Myint Lwin's Hot Wi...
20-5-2011 HIV ဆေးသစ် Edurant ကို FDA...
webcam video !
လျှပ်တပြတ် ရိုက်ချက် ၄ @drcha...
Myanmar Cute Actress: Waso Moe Oo's Casual Fashio...
မျက်နှာသစ် အဆိုတော်မလေးတဲ့ @ကိုးမြို့...
ကျောင်းသား - ဆရာမ အသည်း...
Myanmar Popular Model, Christina
Myanmar Former Super Model, Thandar Hlaing
Myanmar new face model Berry Daiquiri
Myanmar New Face Model May Lay ...
Ya Min Thiri Zaw Jin Mei Xin Fabulous Chinese babe Olwen ...
Hot Actress Nawayat Nawayat's Hot and Sexy Style...
Thinzar Wint Kyaw's beach fashion Myanmar Hot an...